အိမျထောငျမှု သာယာတယျ၊ စီးပှားလညျးတကျတယျဆိုတာ အိမျတဈအိမျ စီးပှားတကျဖို့ယတာခနြေဖေို့ မလိုဘူးတဲ့ … - MM Live News
January 7, 2020 MM Live
အ ရမ်းေ ကာင်းလိုက်တဲ့ စာလေးဗျာ။ ပိုင်အိုးနီးယား စားသောကဆိုင် ပိုင်ရှင် ကိုဇော်မိုးပြောပြတဲ့ အိမ်တစ်အိမ် စီးပွားတက်ဖို့ယတာချေနေဖို့ မလိုဘူးဆိုတဲ့ စကား အရမ်းမိုက်တယ်ဗျာ၊ ဖတ်ကြည့်ပါ
လ င်နှင့် မ ယားချစ်ကြင်ငြားစီးပွားတက်မည်သာ….
စီး ပွား တက် ချင်ရင် လင်နဲ့မယား ရန်မဖြစ်ကြဖို့လိုတယ်။ ဘာဖြစ်လို့ ရန်ဖြစ်ရင် စီးပွားမတက်တာလဲ။ရန်ြ ဖစ်ပြီ ဆို တာနဲ့ ဝစီဒုစရိုက် မနောဒုစရိုက်မှုတွေ ကျူးလွန်မိတော့တာကိုး။ လင်နဲ့မယား ရန်မဖြစ်တဲ့အချိန်က နက္ခတ်ကောင်းတဲ့အချိန်ပါပဲ။
နက္ခတ်ကောင်းရင် စီးပွားတက်မှာပဲ။ နက္ခတ်ကောင်းဖို့ ယတြာချေနေဖို့ မလိုဘူး။ လင်နဲ့မယား ရန်မဖြစ်ဖို့ပဲ လိုတယ်။လူ ဆို တာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အကောင်းချည်းပဲထင်နေတတ်ကြတယ်။ ပုထုဇဉ်တွေပဲဆိုတော့ အကောင်းချည်းပဲဆိုတာတော့ဖြစ်မလာဘူး။
လင်မယားဆိုတာ ကောင်းတိုင်ပင် ဆိုးတိုင်ပင်ရှိရမယ်။ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် အပြစ်မမြင်..အပြစ်မတင်ရဘူး။တ စ်ယောက် ကို တစ်ယောက် မေတ္တာရှေ့ထားပြီးတော့ အပြုသဘောဆောင်ပြီးသတိပေးကြရမယ်။လင်နှင့်မယားရန်ဖြစ်ငြားစီးပွားပျက်မည်သာ။
ဒါ ကေ တာ့ မိုးသု -(မန္တလေး) က စီးပွားတက်ဖို့အတွက်ရန်မဖြစ်မိကြဖို့ အိမ်ထောင်သည်တွေကို သတိပေးထားတာလေးပေါ့။အိ မ်ထောင် တစ်ခု စီးပွားတက်ဖို့ဆိုရင်…မှန်ပါတယ် မိုးသု ရှင်းပြထားသလို လင်မယားတွေ ရန်သတ်နေလို့မဖြစ်ပါဘူး။ဒါဟာလည်း စီးပွားဖြစ်ခြင်း၊မဖြစ်ခြင်းထက်
နံပါတ်(၁)အချက်ကတော့ အမြဲ ရန်သတ်နေတဲ့ အိမ်က သာယာတဲ့ စိတ်ချမ်းသာမှု မရတာတော့အမှန်ပဲ။ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင် ကျက်သရေမရှိတဲ့အိမ်ပေါ့။ကျွန်တော် ဝန်ထမ်းအိမ်ထောင်သည် စုံတွဲကလေးတွေ တစ်ရက်ခြား ရန်ဖြစ်ကြတယ်။
ရန်ဖြစ်တိုင်းခေါ်ဆုံးမရတာက အလုပ်တစ်လုပ်။တချို့ကြတော့ ရန်ဖြစ်ပြီဆို အလုပ်ပျက်၊ အလုပ် ခန၊ ခန ပျက်ရင် ကြာတော့ အလုပ်ထုတ်ရတော့တာပေါ့ (ဒါလည်း စီးပွားပျက်ခြင်း တမျိုးပဲ)..။
တ ချို့ ချစ်ချစ်ခင်ခင်နေတဲ့ အိမ်ထောင်သည် စုံတွဲတွေကြပြန်တော့၊ လင်အလုပ် မယားကကူ၊ မယားအလုပ် လင်ကကူနဲ့ သူတို့လေးတွေကြပြန်တော့ ရွှေတွဲလွဲ ငွေတွဲလွဲနဲ့ပေါ့။ ဒါက ဝန်ထမ်းအိမ်ထောင်သည်တွေနဲ့ ဥပမာနှိုင်းပြတာ။
ကျွန်တော် တို့လင်မယား နှစ်ယောက်အပေါ် ဝန်ထမ်းကလေးတွေ ပဟေဠိ ဖြစ်နေတဲ့အချက်တစ်ခုရှိတယ်၊အဲ ဒါ က ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက် ရန်ဖြစ်တာမတွေ့ကြလို့တဲ့ဗျ။ အိမ်ထောင်သည်ဝန်ထမ်းတွေကော၊ အိမ်ထောင်မသည်သေးတဲ့ဝန်ထမ်းလေးတွေကောပေါ့….
သူ တို့ ကျင်လည်လာတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်၊ သူတို့မိဘတွေ ရန်ခနခနဖြစ်ကြတယ်တဲ့၊ တည့်တဲ့အချိန်ကနဲတယ်၊ ကိုကိုကြီးနဲ့မမ ကြတော့ရန်ဖြစ်တာ တစ်ခါမှမတွေ့ဘူးဆိုပြီးလာမေးကြတဲ့အထိပေါ့….
သူ တို့ရှေ့မှာ ရန်ဖြစ်တာမတွေ့လို့ လာမေးကြတာ။ရှေ့မှာရန်မဖြစ်သလို ကွယ်ရာမှာလဲ ရန်မဖြစ်ဘူး။ ဘာကြောင့်ရန်မဖြစ်ကြတာလဲ? တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ချစ်လို့ယူထားကြတာလေ။
ရန်ြ ဖစ် ဖို့ယူတာမှမဟုတ်တာ။ ရည်းစားဘဝမှာဘယ်လောက်ပဲအလိုလိုက်လိုက်၊ ဘယ်လောက်ပဲချစ်ချစ်၊ တချို့တချို့တွေအိမ်ထောင်ကြပြီးနောက်ပိုင်း လက်ပါလာကြတယ်။ အလွန်အမင်းရိုက်နက်ကြတဲ့သူတွေလည်း ရှိတယ်။
သူ တို့ တွေကို တွေ့တော့ ရည်စားဘဝတုန်းက ဘယ်လိုများ ချစ်စကားပြောလာကြလည်းဆိုတာ အရမ်းသိချင်မိတယ်။ မိန်းခလေးဘက်ကလည်း ဘယ်လောက်ထိ အိုက်တင်ခံပြီးမှ အဖြေပေးသလဲဆိုတာသိချင်မိတယ်။
ကျွန်တော်တုန်းက ခက်ခက်ခဲခဲချစ်ခွင့်ပန်ခဲ့ရတယ်၊ အခက်အခဲတွေအများကြီးကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်၊ ဒီလိုခက်ခဲစွာရယူလာခဲ့ရတဲ့အချစ်ကိုတန်ဖိုးထားတယ်၊မြတ်နိုးတယ်။တ ကယ်ေ တာ့ လင်မယားဆိုတာ အရင်းနီးဆုံးမိတ်ဆွေတွေလေ၊ထိလျှလွယ်တယ်။
ရန်မဖြစ်မိအောင် အတတ်နိုင်ဆုံး ဖြေလျော့တတ်ရမယ်။ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်က တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် နားလည်းမှု အပြည့်ရှိကြတယ်။နား လည် မှုဆိုတာ ဆင်းရဲတာ၊ချမ်းသာတာနဲ့မဆိုင်ဘူးနော်။နောက်တစ်ချက်က ငါဆိုတဲ့ အတ္တစွဲတွလျော့ချပစ်ရမယ်။
လူပဲအခန့်မသင့်ရင် စိတ်တော့တိုတတ်ကြတာပေါ့။ စိတ်တိုတိုင်းလည်း ပေါက်ကွဲပြစ်လို့မရဘူး၊ ပေါက်ကွဲမှုပြင်းရင်ပြင်းသလို အပိုင်းအဆတွေက လွှင့်စင်ထွက်သွားတတ်ကြတယ်….
န ဂို အ တိုင်းပြန်ဖြစ်ဖို့လွှင့်သွားတဲ့ စိတ်ဒဏ်ရာ အပိုင်းအဆတွေကိုပြန်ဆက်ရတာမလွယ်ဘူးလေ။ ဒီတော့ ဒေါသရဲ့ပေါက်ကွဲမှုအားကို နည်းနိုင်သလောက်နည်းအောင် ပထမအဆင့်လျော့ချနိုင်ရမယ်။
မဖြစ်နိုင်တာမရှိပါဘူး၊ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ ထစ်ကတည်းနေရင် ထွက်တတ်တဲ့ ဒေါသအကျင့်ကလေးကို ဖြေးဖြေးချင်းလျော့ချကြည့်ပါ။ လင်မယားတွေရန်ဖြစ်တာ နည်းလာလေ….
ပတ် ဝန်းကျင်က ကိုယ့်ကိုလေးစားအထင်ကြီးလာလေပါပဲ၊ စိတ်ချမ်းသာမှုအမြဲရနေရင် အလုပ်လုပ်ရတာလည်း အဆင်ပြေလာမယ်၊စီးပွားလည်းသူ့အလိုလိုဖြစ်လာတာပေါ့။
ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက် ရန်မဖြစ်ကြဘူး။ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်ဖေးမကူညီတယ်။ ဒါကြောင့် အိမ်ထောင်မှု သာယာတယ်၊ စီးပွားလည်းတက်တယ်ဆိုတာ နိဂုံး ချုပ်ပြောပြချင်ပါတယ်။
လေးစားစွာဖြင့်….ဇော်မိုးပိုင်အိုးနီးယား ၁၁၅ , Credit-Zaw Moe
အ ရမျးေ ကာငျးလိုကျတဲ့ စာလေးဗြာ။ ပိုငျအိုးနီးယား စားသောကဆိုငျ ပိုငျရှငျ ကိုဇျောမိုးပွောပွတဲ့ အိမျတဈအိမျ စီးပှားတကျဖို့ယတာခနြေဖေို့ မလိုဘူးဆိုတဲ့ စကား အရမျးမိုကျတယျဗြာ၊ ဖတျကွညျ့ပါ
လ ငျနှငျ့ မ ယားခဈြကွငျငွားစီးပှားတကျမညျသာ….
စီး ပှား တကျ ခငျြရငျ လငျနဲ့မယား ရနျမဖွဈကွဖို့လိုတယျ။ ဘာဖွဈလို့ ရနျဖွဈရငျ စီးပှားမတကျတာလဲ။ရနျွ ဖဈပွီ ဆို တာနဲ့ ဝစီဒုစရိုကျ မနောဒုစရိုကျမှုတှေ ကြူးလှနျမိတော့တာကိုး။ လငျနဲ့မယား ရနျမဖွဈတဲ့အခြိနျက နက်ခတျကောငျးတဲ့အခြိနျပါပဲ။
နက်ခတျကောငျးရငျ စီးပှားတကျမှာပဲ။ နက်ခတျကောငျးဖို့ ယတွာခနြေဖေို့ မလိုဘူး။ လငျနဲ့မယား ရနျမဖွဈဖို့ပဲ လိုတယျ။လူ ဆို တာ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ အကောငျးခညျြးပဲထငျနတေတျကွတယျ။ ပုထုဇဉျတှပေဲဆိုတော့ အကောငျးခညျြးပဲဆိုတာတော့ဖွဈမလာဘူး။
လငျမယားဆိုတာ ကောငျးတိုငျပငျ ဆိုးတိုငျပငျရှိရမယျ။ တဈယောကျကို တဈယောကျ အပွဈမမွငျ..အပွဈမတငျရဘူး။တ ဈယောကျ ကို တဈယောကျ မတ်ေတာရှထေ့ားပွီးတော့ အပွုသဘောဆောငျပွီးသတိပေးကွရမယျ။လငျနှငျ့မယားရနျဖွဈငွားစီးပှားပကျြမညျသာ။
ဒါ ကေ တာ့ မိုးသု -(မန်တလေး) က စီးပှားတကျဖို့အတှကျရနျမဖွဈမိကွဖို့ အိမျထောငျသညျတှကေို သတိပေးထားတာလေးပေါ့။အိ မျထောငျ တဈခု စီးပှားတကျဖို့ဆိုရငျ…မှနျပါတယျ မိုးသု ရှငျးပွထားသလို လငျမယားတှေ ရနျသတျနလေို့မဖွဈပါဘူး။ဒါဟာလညျး စီးပှားဖွဈခွငျး၊မဖွဈခွငျးထကျ
နံပါတျ(၁)အခကျြကတော့ အမွဲ ရနျသတျနတေဲ့ အိမျက သာယာတဲ့ စိတျခမျြးသာမှု မရတာတော့အမှနျပဲ။ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးပွောရရငျ ကကျြသရမေရှိတဲ့အိမျပေါ့။ကြှနျတျော ဝနျထမျးအိမျထောငျသညျ စုံတှဲကလေးတှေ တဈရကျခွား ရနျဖွဈကွတယျ။
ရနျဖွဈတိုငျးချေါဆုံးမရတာက အလုပျတဈလုပျ။တခြို့ကွတော့ ရနျဖွဈပွီဆို အလုပျပကျြ၊ အလုပျ ခန၊ ခန ပကျြရငျ ကွာတော့ အလုပျထုတျရတော့တာပေါ့ (ဒါလညျး စီးပှားပကျြခွငျး တမြိုးပဲ)..။
တ ခြို့ ခဈြခဈြခငျခငျနတေဲ့ အိမျထောငျသညျ စုံတှဲတှကွေပွနျတော့၊ လငျအလုပျ မယားကကူ၊ မယားအလုပျ လငျကကူနဲ့ သူတို့လေးတှေကွပွနျတော့ ရှတှေဲလှဲ ငှတှေဲလှဲနဲ့ပေါ့။ ဒါက ဝနျထမျးအိမျထောငျသညျတှနေဲ့ ဥပမာနှိုငျးပွတာ။
ကြှနျတျော တို့လငျမယား နှဈယောကျအပျေါ ဝနျထမျးကလေးတှေ ပဟဠေိ ဖွဈနတေဲ့အခကျြတဈခုရှိတယျ၊အဲ ဒါ က ကြှနျတျောတို့နှဈယောကျ ရနျဖွဈတာမတှကွေ့လို့တဲ့ဗြ။ အိမျထောငျသညျဝနျထမျးတှကေော၊ အိမျထောငျမသညျသေးတဲ့ဝနျထမျးလေးတှကေောပေါ့….
သူ တို့ ကငျြလညျလာတဲ့ ပတျဝနျးကငျြ၊ သူတို့မိဘတှေ ရနျခနခနဖွဈကွတယျတဲ့၊ တညျ့တဲ့အခြိနျကနဲတယျ၊ ကိုကိုကွီးနဲ့မမ ကွတော့ရနျဖွဈတာ တဈခါမှမတှဘေူ့းဆိုပွီးလာမေးကွတဲ့အထိပေါ့….
သူ တို့ရှမှေ့ာ ရနျဖွဈတာမတှလေို့ လာမေးကွတာ။ရှမှေ့ာရနျမဖွဈသလို ကှယျရာမှာလဲ ရနျမဖွဈဘူး။ ဘာကွောငျ့ရနျမဖွဈကွတာလဲ? တဈယောကျကိုတဈယောကျ ခဈြလို့ယူထားကွတာလေ။
ရနျွ ဖဈ ဖို့ယူတာမှမဟုတျတာ။ ရညျးစားဘဝမှာဘယျလောကျပဲအလိုလိုကျလိုကျ၊ ဘယျလောကျပဲခဈြခဈြ၊ တခြို့တခြို့တှအေိမျထောငျကွပွီးနောကျပိုငျး လကျပါလာကွတယျ။ အလှနျအမငျးရိုကျနကျကွတဲ့သူတှလေညျး ရှိတယျ။
သူ တို့တှကေို တှတေ့ော့ ရညျစားဘဝတုနျးက ဘယျလိုမြား ခဈြစကားပွောလာကွလညျးဆိုတာ အရမျးသိခငျြမိတယျ။ မိနျးခလေးဘကျကလညျး ဘယျလောကျထိ အိုကျတငျခံပွီးမှ အဖွပေေးသလဲဆိုတာသိခငျြမိတယျ။
ကြှနျတျောတုနျးက ခကျခကျခဲခဲခဈြခှငျ့ပနျခဲ့ရတယျ၊ အခကျအခဲတှအေမြားကွီးကွုံတှခေဲ့ရတယျ၊ ဒီလိုခကျခဲစှာရယူလာခဲ့ရတဲ့အခဈြကိုတနျဖိုးထားတယျ၊မွတျနိုးတယျ။တ ကယျေ တာ့ လငျမယားဆိုတာ အရငျးနီးဆုံးမိတျဆှတှေလေေ၊ထိလြှလှယျတယျ။
ရနျမဖွဈမိအောငျ အတတျနိုငျဆုံး ဖွလြေော့တတျရမယျ။ကြှနျတျောတို့နှဈယောကျက တဈယောကျကိုတဈယောကျ နားလညျးမှု အပွညျ့ရှိကွတယျ။နား လညျ မှုဆိုတာ ဆငျးရဲတာ၊ခမျြးသာတာနဲ့မဆိုငျဘူးနျော။နောကျတဈခကျြက ငါဆိုတဲ့ အတ်တစှဲတှလြော့ခပြဈရမယျ။
လူပဲအခနျ့မသငျ့ရငျ စိတျတော့တိုတတျကွတာပေါ့။ စိတျတိုတိုငျးလညျး ပေါကျကှဲပွဈလို့မရဘူး၊ ပေါကျကှဲမှုပွငျးရငျပွငျးသလို အပိုငျးအဆတှကေ လှငျ့စငျထှကျသှားတတျကွတယျ….
န ဂို အ တိုငျးပွနျဖွဈဖို့လှငျ့သှားတဲ့ စိတျဒဏျရာ အပိုငျးအဆတှကေိုပွနျဆကျရတာမလှယျဘူးလေ။ ဒီတော့ ဒေါသရဲ့ပေါကျကှဲမှုအားကို နညျးနိုငျသလောကျနညျးအောငျ ပထမအဆငျ့လြော့ခနြိုငျရမယျ။
မဖွဈနိုငျတာမရှိပါဘူး၊ ခငျဗြားတို့ရဲ့ ထဈကတညျးနရေငျ ထှကျတတျတဲ့ ဒေါသအကငျြ့ကလေးကို ဖွေးဖွေးခငျြးလြော့ခကြွညျ့ပါ။ လငျမယားတှရေနျဖွဈတာ နညျးလာလေ….
ပတျ ဝနျးကငျြက ကိုယျ့ကိုလေးစားအထငျကွီးလာလပေါပဲ၊ စိတျခမျြးသာမှုအမွဲရနရေငျ အလုပျလုပျရတာလညျး အဆငျပွလောမယျ၊စီးပှားလညျးသူ့အလိုလိုဖွဈလာတာပေါ့။
ကြှနျတျောတို့နှဈယောကျ ရနျမဖွဈကွဘူး။ တဈယောကျကိုတဈယောကျဖေးမကူညီတယျ။ ဒါကွောငျ့ အိမျထောငျမှု သာယာတယျ၊ စီးပှားလညျးတကျတယျဆိုတာ နိဂုံး ခြုပျပွောပွခငျြပါတယျ။
လေးစားစှာဖွငျ့….ဇျောမိုးပိုငျအိုးနီးယား ၁၁၅ , Credit-Zaw Moe
တိုငျးပွညျအုပျခြုပျရာမှာ တိုငျးရေး ပွညျရေး မြှျောတှေးခွငျး
ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် ပျောက်သွားခဲ့ရင် ဒီလိုပြန်လျှောက်…ဒီနေ့လျှောက် ဒီနေ့ရတယ်
April 4, 2019 MM Live
December 23, 2018 MM Live
January 27, 2020 MM Live News